Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Zvirongwa zvePathwayCommission Scolaire Marguerite-Borgeoys (CSMB)
Nzira yako yekuCanadaCommission Scolaire Marguerite-Borgeoys (CSMB)
Commission Scolaire Marguerite-Borgeoys (CSMB)Mamwe mashoko
BLI French Level 8 uye Kupinda Bvunzo
Kudzidza tekiniki kutengesa hakurevi kungoisa chete mari mune ramangwana, asiwo muchiitiko chinowanisa.
Iri bhizinesi riri kubuda nekukurumidza nekomputa nyowani uye ecology technologies. Iwe unozodzidza kuburikidza neaya matekinoroji matsva ekuongorora uye kugadzirisa zvese zvemuchina uye zvemagetsi zvikamu. Iwe unozodzidzawo kuve nechekuita muzvinhu zvese zvekugadzirisa nekuchengetedza mota.
Nguva Yekutora: Mwedzi 16 yekudzidziswa uye kudzidziswa
Basa rekutora mifananidzo rakakwana kune avo vanoda kutaura ivo pachavo nekuratidzira kwavo kugona. Muzera remifananidzo yemadhijitari, vadzidzisi vane ruzivo vari kudzidzisa vashandi vanoita zvepamusoro avo vanozoshanda vega kana sechikamu chechikwata chekugadzira mumakambani akazvimirira.
Vedu vakapedza kudzidza vanoshanda mumapato akasiyana akachengetedzeka anosanganisira mafashoni, kushambadza, kudhindisa, kutora maindasitiri kutora mifananidzo, nezvimwe.
Nguva Yachinotora: Inosvika mwedzi gumi nematanhatu (maawa 16)
KUPINDA UYE REPAIR YEMUFANANIDZO WEMAHARA
Panguva iyo telecommunication iri pese pese, kudzidziswa kuiswa uye Kugadziriswa kweTerekufambisa Zvishandiso kunopa vadzidzi vedu vane yakakwira kuiswa chiyero uye inonakidza uye yekumberi-yekutarisa basa. Munzvimbo yekudzidza inoenderana nenzvimbo dzekubasa uye kubatanidza matekinoroji matsva, chirongwa chedu chinodzidzisa vane hunyanzvi mahunyanzvi.
Nguva Yekutora: Zvinoda kusvika mwedzi gumi nematanhatu kusanganisira vhiki nhatu dzevadzidzi (16 maawa)
Kudiwa kwevashandi vekutsigira komputa kwakanyanya uye indasitiri inopa mibairo yemakwikwi. Vashandisi vemakomputa vanobatsira pakuisa uye kushanda kwemidziyo yemakomputa.
Nguva yekutora: mwedzi gumi nematanhatu kusanganisira vhiki gumi neshanu dzevadzidzi (maawa 16)
Vadzidzi mukugadzira dhizaina vanofarira kwazvo kuvakwa kwezvakavakwa. Vanokanganisa, vane chimiro chakakwana chekuita mabasa anoda kutarisisa kwakadzama kune ruzivo. Chirongwa chedu chinovavarira kudzidzisa varapi vanoshandisa dhizaini kumucheto kwekucheka kwetekinoroji kufambira mberi.
Iyo software inoshandiswa ndeye AutoCAD, Revit kuvaka, Revit MEP uye Revit chimiro. Vedu vakapedza kudzidza vanoshanda mumakambani akadai seyekuvaka, mainjiniya, kuvaka mechanics nekuvaka.
Nguva yekudzidziswa: mwedzi gumi nematanhatu kusanganisira masvondo mana ekudzidzira (16 maawa)
Aya mabasa ane hukama neIndasitiri Dhizaini kudzidziswa anoitirwa avo vane pfungwa yakasimba yekutarisa.
Vadzidzi vedu vanopedza basa vanoshanda mumakambani akawanda akawanda mukubatana pamwe nevagadziri uye mainjiniya. Ivo vanonyoreswa nemakambani makuru: enjiniya mafemu, emakambani ekuvaka, vanogadzira michina, nezvimwewo.
Dzingangoita mwedzi 16 kusanganisira mavhiki matatu ekudzidzira (3 maawa)
INDUSTRIAL KUSVIRA NEMAKONESI MITEMO
Aya mabasa anoenderana nekudzidziswa muindasitiri Mechanics Yekuvaka uye Gadziriso akagadzirwa-inoitirwa kune avo vane pfungwa dzakasimba uye vanokara nehunhu.
Aya ma future emuchina mechanics mahunyanzvi anoshanda mumashure matanho akadai pulp uye pepa, kugadzira chikafu, machira, kugadzirwa kwemaindasitiri michina, nezvimwe.
Nguva yekutora: mwedzi gumi nematanhatu kusanganisira vhiki nhatu dzevadzidzi (16 3 maawa)
Vedu vakapedza kudzidza vanoshanda muSMEs nemakambani epasi rese mune mota, aeronautics, ndege yemigodhi, migodhi uye zvimwe zvikamu.
Nguva Yekutora: Zvinoda kusvika mwedzi gumi nematanhatu, kusanganisira mavhiki matatu ekudzidziswa (maawa 16)
KUPENESA DESIGN uye KUONESESESA KWEMAHARA
Iyo profesheni ine chekuita nechomukati dhizaini uye inoonekwa yekudzidziswa kudzidzisa yakagadzirirwa kune vanogadzira pfungwa avo vanoshuva kuisa tarenda ravo remhizha pakushandira vanhu.
Munzvimbo inokodzera kugadzirwa, vadzidzisi vanozivikanwa vanoita basa reruzivo rwekudzidzisa vatambi. Vedu vakapedza kudzidza vanoshanda munzvimbo inosimudzira uye inogara ichiitika. Ivo vanozvishandira kana kushanda munzvimbo dzekushongedza, zvitoro zvevatengesi nemakambani makuru.
Dzidzo yacho inotora mwedzi ingangosvika gumi nematanhatu, kusanganisira mavhiki mana ekudzidzira (maawa 16).
Wakabudirira BLI French Level 8